Walaal salaan kadib ujeedadu inaad guur farxad leh hesho ood lawadaagto nin naxariis iyo kalgacal micnahooda yaqaan waxa lagaa rabay inad warbixinta so dhiibto iyadoo dhamaystiran, sababo badan awgood:1. Qof walbaa dookh ayu leeyahay, qof sidee ah ayad tahay inaan ogano waan jeclaan lahayn2. Inay dhabkjaa tahay iyo in kale in la ogado iyana wa muhimHadii ay kaa ahayn inaad soomaliga ku barato, so gudbi profile kaaga. Hady dacad kaa tahay walaalo badan oo kula qaba kalgacalka iyo jacaylkaba, aadna wadaagtaan din iyodhaqan waad heli. Baahida adoomahana alle iyaguu iskugu buuxiyaa.MahadsanidNext time aaaa ha soo qorin, sababtoo ah ninki ku rabi lahaa adigaab ayur leh. Advertisement
aduunkii ayad ka dhigteen germarkii suu ahaa #-4
salaamu calaaeykum #-2